kubira maseva ewebhu - pfupiso
Kuru Chengetedzo Kubiridzira Webhu Servers - Chidimbu
Webhu sevha sisitimu inoshandiswa kuchengetedza, kugadzirisa, uye kuendesa mawebhusaiti. Iyo yakagadzirirwa kubata webhu kunyorera, ichibvumira vatengi kuti vawane iwo maapplication.
Iyo inoshandisa mutengi-server modhi dhizaini, mune iyo ine sevha basa, uye bhurawuza ine yevatengi basa.
Maseva eWebhu ane:
Gwaro mudzi - dura rinochengeta mafaera eHTML yewebhusaiti
Server mudzi - dhairekitori rinochengeta kumisikidza, danda, uye mafaera ekuita
Yechokwadi gwaro muti - mhando yekuchengetera iri pane rakasiyana dhisiki uye rinoshandiswa kana iro rekutanga diski razara
Kubata chaiko - kubata inopfuura imwechete dura pane imwechete server
Webhu Proxy - sevha yakaiswa pakati pemutengi uye sevha, zvinoreva kuti zvese zvikumbiro zvinouya kubva kumutengi zvinopfuura neproxy kune server, pachinzvimbo chekuenda zvakananga kuseva.
Webhu Sosi Kutyisidzira uye Kurwisa
Kungofanana nechero komputa system, mawebhusaiti zvakare anogona kukanganiswa. Vanorwisa vanoshandisa matekinoroji akasiyana siyana kuti vatange kurwisa pane zvakanangwa nemaseva ewebhu uye vawane mukana usingabvumirwe.
Kumwe kwekurwiswa kunosanganisira:
DoS / DDoS Kurwisa
DoS / DDoS kurwisa kurwisa uko uyo anorwisa anotumira nhamba hombe yezvikumbiro kune yakanangwa webhu server kudzivirira server kubva mukushanda nemazvo.
DNS Server Kubira
DNS server kubira kurwisa kurwisa uko uyo anorwisa anovavarira sevha yeDNS uye hasha nemagadzirirwo ayo emepu zvichiita kuti itungamirezve vatengi kune yakashata sevavhavha iyo inoshumira iyo yakaipa webhusaiti webhusaiti.
DNS Kuwedzeredza Kurwisa
DNS Amplification Attack kurwisa uko uyo anorwisa anoshandisa iyo inodzokororwa yeDNS query kutumira nhamba hombe yezvikumbiro nekero ye IP kune iyo server yeDNS ichiikurudzira kupindura kukero yeIP yekwakananga uye nenzira yakadaro inokunda sevhisi yechinangwa.
Dhairekita Traversal Kurwisa
Dhairekita yekuyambuka kurwisa kurwisa uko iye anorwisa anoshandisa zvinongedzo URL kuti awane mukana kune madhairekitori akarambidzwa.
Man-in-iyo-yepakati kurwisa kurwisa uko iye anorwisa anobata traffic iri kuenda kubva kumutengi kuenda kuseva uye kumashure. Vanozviita nekunyepera mutengi kuti afunge kuti iye ari kurwisa ishe. Kamwe mutengi paanogamuchira kubatana kubva kune anorwisa, iko kutaurirana kwese pakati pemutengi uye sevha kunoenda kuburikidza neanorwisa, kuchivabvumira kuba ruzivo.
Phishing kurwisa ndiko kurwisa uko uyo anorwisa anotumira email kune chakanangwa nezvisungo zvisina kunaka. Kamwe tarisiro painodzvanya pane iyi link, vanoendeswa kune webhusaiti yakaipa iyo inovakurudzira kuti vape ruzivo rwakashata. Iye anorwisa anobva abira ruzivo urwu.
Kurwiswa kwewebhusaiti kurwisa kurwisa uko iye anorwisa anoita shanduko kune izvo zviri mukati mewebhusaiti.
Webhu Server Server Kusarongeka
Webhu sava kusarongeka kwekugadzirisa kurwisa kurwisa uko iye anorwisa anoshandisa kushomeka mune kusanzwisisika kweseva.
Kupindura kweHTTP Kupatsanura Kurwisa
Mhinduro yeHTTP Kupatsanura kurwisa kurwisa uko uyo anorwisa anopinza mitsara mitsva mumusoro wemhinduro, zvichiita kuti sevha ipatsanure mhinduro imwe kuita mbiri. Iye anorwisa anozogona kudzora mhinduro yekutanga ichibva kuseva uye kuendesa mutengi kune webhusaiti yakaipa.
Webhu Cache Chepfu
Web cache chepfu kurwisa uko iye anorwisa anotsiva zvakachengetwa zvemukati nechakaipa.
SSH Brute Force Kurwisa
SSH brute simba kurwisa kurwisa uko uyo anorwisa anowana magwaro eSSH ekupinda uye kugadzira SSH tunnel pakati pevaviri mauto mavanogona kubuditsa zvinokuvadza.
Webhu Server Server Kutsemura Kurwisa
Webhu sevha password kupaza kurwisa kurwisa uko iye anorwisa anotsemura tarisiro server mapassword uye anoishandisa kuita kurwisa kutsva.
Webhu Kunyorera Kurwisa
Webhu kunyorera kunyorera kurwisa uko iye anorwisa anoshandisa kushomeka mukodhi yekushandisa.
Webhu Server Kubiridzira Methodology inopa vanorwisa nematanho ekutevera kuti vaite kurwisa kwakabudirira.
Aya matanho ndeaya:
Unganidza ruzivo nezve yakanangwa webhu server
Dzidza nezvesevha iri kure yekugona kugona, zviteshi, uye masevhisi
Mirror iyo yakanangwa webhusaiti kuti uitarise kunze kwenyika
Ita chikamu kubiwa uye password kutsemuka kurwisa
Munguva yedanho rekuunganidza ruzivo, anorwisa anogona kuyedza kutora icho chakanangwa robots.txt faira, iine madhairekitori uye mafaera akavanzwa kubva kune vanokambaira pawebhu. Iyi faira inogona kupa anorwisa neruzivo senge mapassword, maemail, uye zvakavanzika zvinongedzo.
Kuita matanho ataurwa pamusoro apa uye kubudirira kubiridzira, varwisi vanoshandisa maturusi akadai se Metasploit uye Wfetch .
Metasploit ipuratifomu yekuyedza yekupinda iyo inoita kuti iwe ugone kutsvaga, kushandisa, uye kusimbisa kusagadzikana.
Wfetch chishandiso chinoratidza chikumbiro uye mhinduro kuitira kuti kutaurirana kunzwisisike. Inogona kushandiswa kugadzira zvikumbiro zveHTTP zvinoyedza mashandiro emawebhusaiti matsva kana emaWebhu saiti ane zvinhu zvitsva, senge Active Server Mapeji (ASP) kana maprotocol asina waya.
Webhu Server Inorwisa Kupokana
Inokurudzirwa kuti webhu yekubatira network ine zvikamu zvitatu:
Iyo dura rewebhu inofanirwa kuiswa muDMZ kuitira kuti igare iri yoga kubva kune ese Internet uye yemukati network. Chikamu chega chega chinofanirwa kuchengetedzwa ne firewall uye iine hub yayo kana switch.
Imwe nzira yekuzvidzivirira ndeyekuona kuti sevha inogara ichigadziriswa, uye kuti zvigamba zvekuchengetedza uye hotfixes zvinoshandiswa. Zviteshi uye zvirevo izvo zvisiri kushandiswa zvinofanirwa kuvharwa, pamwe neese asina kufanira ICMP traffic.
Default mapassword uye asina kushandiswa default maakaunzi anofanirwa kuchinjwa uye kuremerwa zvakateerana.
Matanda anofanirwa kuongororwa kazhinji kuti ave nechokwadi chekuti sevha haina kukanganiswa.
Shanduko mumafaira anoshanda uye akajairika anogona kuwanikwa nekumhanyisa Webhusaiti Shanduko Yekucherechedzo Sisitimu iyo inowanzoita fananidzo yehash pamafaera kuti uone kana paine shanduko dzakaitwa kwavari nekusimudza yambiro.
renyeredzi s6 bhatiri hupenyu bvunzo
chii single tora samsung
ZeroLemon inotangisa inopenga 10,000mAh bhatiri kesi yeiyo Galaxy Note 3
Iyo yekare-Moto Moto G4 inonzi iri kugamuchira zera-rekare software yekuvandudza
Apple iPhone 11 Pro Max inoratidza yekugadzirisa mitengo, uye akanakisa emadziro ekudzivirira kuti uvadzivise
Iyo Verizon-yakasarudzika Asus ZenFone AR inogona kunge iri kuvhura muUS mangwana
Galaxy S20 & apos; s Imwe Tora: Chii icho uye maitiro ekuishandisa
Ungachinja sei zvirongwa zvevaravara pa Android 5.0 Lollipop (invert, grayscale, nezvimwe)
Samsung inoputira iyo US Android 11 kuburitsa yeGPS S20 FE
Akanakisa kesi eiyo Samsung Galaxy S6 kumucheto